အများပြည်သူစားသုံးရန် မသင့်သောဆီများတွေ့ရှိ ဖျက်ဆီး - Myanmar Daily
အများပြည်သူစားသုံးရန် မသင့်သောဆီများတွေ့ရှိ ဖျက်ဆီး
2019-05-08 Daily Maung local news 0
ပြည်သူတစ်ဦး၏သတင်းပေးမှုဖြင့်စားသုံးရန်မသင့်သောဆီများချက်လုပ်ရောင်းချနေခြင်းအား စစ်ဆေးတွေ့ရှိရသဖြင့် ဆီပိဿချိန်၂၅၀၀ ကျော်အားဖျက်ဆီးပစ်
ပင်းတယမြို့နေပြည်သူတစ်ဦး၏အကြောင်းကြားမှုအရလူနေရပ်ကွက်အတွင်းစားသုံးဆီများကိုကျိုချက်ဗူးသွပ်၍ရောင်းချနေသည့်အနောက်ရပ်ကွက်နေ ဦးဌေးဝင်း ၏ ဆီချက်လုပ်ငန်းအား စစ်ဆေးကာစားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေးကော်မတီရှမ်းပြည်နယ်စားသုံးသူအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်း ရေးအဖွဲ့ (၂/၂၀၁၈-၂၀၁၉)၏ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း အရေးယူခဲ့သည်။
ဆုံးဖြတ်ချက်အရဦးဌေးဝင်းပိုင်ဆိုင်သည့်စားဆီပေပါအပြာ(၁၇)လုံး၁၀ပိဿဝင် ပုံးအဝါ (၅၄)လုံး စုစုပေါင်း ပိဿချိန် (၂၅၀၀)ကျော် အား(MITS)ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ခဲ့ရာစားသုံးရန်မသင့်သည့်ဆီများဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားပေးခဲ့ပြီး ခြောက်လအကြာတွင် စွန့်ပစ်ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွှတ်မှုမရှိသောစားသုံးဆီများကိုဈေးကွက်အတွင်းရောင်းချနေမှုများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်စစ်ဆေးအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီးစားသုံးသူပြည်သူများ၏ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်မှုမရှိစေရန်ဦးစားပေးဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြောင်း၊ စားသုံးသူရေးရာ မှတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပြောကြားခဲ့သည်။
ပွညျသူတဈဦး၏သတငျးပေးမှုဖွငျ့စားသုံးရနျမသငျ့သောဆီမြားခကျြလုပျရောငျးခနြခွေငျးအား စဈဆေးတှရှေိ့ရသဖွငျ့ ဆီပိဿခြိနျ၂၅၀၀ ကြျောအားဖကျြဆီးပဈ
ပငျးတယမွို့နပွေညျသူတဈဦး၏အကွောငျးကွားမှုအရလူနရေပျကှကျအတှငျးစားသုံးဆီမြားကိုကြိုခကျြဗူးသှပျ၍ရောငျးခနြသေညျ့အနောကျရပျကှကျနေ ဦးဌေးဝငျး ၏ ဆီခကျြလုပျငနျးအား စဈဆေးကာ
စားသုံးသူအကာအကှယျပေးရေးကျောမတီရှမျးပွညျနယျစားသုံးသူအငွငျးပှားမှုဖွရှေငျး ရေးအဖှဲ့ (၂/၂၀၁၈-၂၀၁၉)၏ဆုံးဖွတျခကျြအတိုငျး အရေးယူခဲ့သညျ။
ဆုံးဖွတျခကျြအရဦးဌေးဝငျးပိုငျဆိုငျသညျ့စားဆီပပေါအပွာ(၁၇)လုံး၁၀ပိဿဝငျ ပုံးအဝါ (၅၄)လုံး စုစုပေါငျး ပိဿခြိနျ (၂၅၀၀)ကြျော အား(MITS)ဓာတျခှဲခနျးတှငျဓါတျခှဲစမျးသပျခဲ့ရာစားသုံးရနျမသငျ့သညျ့ဆီမြားဖွဈကွောငျးကိုရှငျးလငျးပွောကွားပေးခဲ့ပွီး ခွောကျလအကွာတှငျ စှနျ့ပဈဖကျြဆီးခဲ့ကွောငျးသိရှိရပါသညျ။
ကနျြးမာရေးနှငျ့ညီညှတျမှုမရှိသောစားသုံးဆီမြားကိုဈေးကှကျအတှငျးရောငျးခနြမှေုမြားကိုစဉျဆကျမပွတျစဈဆေးအရေးယူဆောငျရှကျသှားမညျဖွဈပွီးစားသုံးသူပွညျသူမြား၏ကနျြးမာရေးကိုထိခိုကျမှုမရှိစရေနျဦးစားပေးဆောငျရှကျလြှကျရှိကွောငျး၊ စားသုံးသူရေးရာ မှတာဝနျရှိသူတဈဦးကပွောကွားခဲ့သညျ။
ဆရာမင်းသိင်္ခ၏ ခုနှစ်ရက်သားသမီးတစ်ပတ်စာ အခမဲ့ ဟောစာတမ်း (7.5. 2019 မှ 13.5. 2019 ထိ)